Torotoro ny avonavona
"Fa noho ny fahasoavana nomena ahy dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo: Aza miavonavon-kevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony hoheverina; fa mihevera izay onony araka ny ohatry ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy" - Rom. 12:3.
Iray amin'ny fomba fanamasinana ampiasain'Andriamanitra ny fanekena ny fahamarinana. Arakaraka ny hahatakarantsika mazava tsara kokoa ny fahamarinana nomeny antsika no hankatoavantsika izany amim-pahatokiana bebe kokoa, ary arakaraka ny hanombanantsika ny tenantsika ho ambany kokoa no hanombanan'ny lanitra antsika ho ambony kokoa. Arakaraka ny hanaovantsika ezaka tsy misy fitiavan-tena ho an'Andriamanitra no hampitovy kokoa ny hery miasa mangina avy amin'izany amin'ny an'i Kristy, sy hahalehibe kokoa ny zava-tsoa hotanterahiny.
Misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny toe-panahin'izao tontolo izao sy ny toe-panahin'i Kristy. Mitarika ho amin'ny fikatsahana ny tombontsoan'ny tena manokana, sy miezaka hanangona harena izay ho levon'ny afo amin'ny andro farany ny iray; ny iray kosa mitarika ho amin'ny fandavan-tena sy fanoloran-tena, ary miezaka manangona ny harena izay tsy ho levona na oviana na oviana.
Manorotoro ny fo vato ny Fanahy .Masina rehefa raisina amin'ny finoana. Fanahy sy herin'ny fanamasinana avy amin'ny fahamarinana izany, ary loharanon'ny finoana izay miasa amim-pitiavana, ka manadio ny fo. Ny tena fisandratana marina rehetra dia avy amin'ny fanetren-tena hita teo amin'ny fiainan'i Kristy, izay naseho tamin'ny alalan'ny sorona mahatalanjona
nataony hamonjena ny fanahy very. Tsy maintsy manetry ny tenany aloha ny olona hasandratr'Andriamanitra. Nasandratr'Andriamanitra ho ambonin'ny anarana rehetra i Kristy. Tsy maintsy nidina tany amin'ny fahorian'olombelona tany amin'ny lalina indrindra anefa aloha i Kristy, ka nifamatotra tamim-pangorahana tamin'ny taranak' olombelona tamin'ny alalan'ny fahalemem-panahiny sy ny fahamoram-panahiny. Namela ohatra tokony harahin'ireo rehetra hirotsaka an-tsehatra eo amin'ny asany Izy.
"Mianara Amiko", hoy ilay Mpampianatra lehibe indrindra tsy mbola fahitan'izao tontolo izao. "Mianara amiko; fa malemyfanahy sady tsy miavona am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an 'ny fanahinareo hianareo" - Mat. 11:29. Tsy ampy ho antsika ny mamaky ny Tenin'Andriamanitra. Nomena ho tari-dalana ho antsika ny Soratra Masina, ka tsy maintsy mandalina izany amim-pitandremana sy amim-pahazotoana fatratra isika. Tsy maintsy mianatra ny Tenin'Andriamanitra isika, ka mampitaha andininy iray amin'ny andininy iray hafa. Ny Soratra Masina ihany no fanalahidy hamahana ny Soratra Masina. Rehefa mamaky sy mianatra ary mivavaka isika dia eo anilantsika Hay Mpampianatra avy amin'Andriamanitra, ny Fanahy Masina, hanazava ny fahalalantsika, mba ho takatsika ireo fahamarinana lehibe ao amin'ny Tenin'Andriamanitra. - PUR, 23 Feb. 1905.